Iikhosi ze-18 zaseStanford zasimahla ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi 2022
Iikhosi ze-18 zaseStanford zasimahla ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi
Eli nqaku libonisa malunga ne-18 yeStanford yasimahla iikhosi ezikwi-intanethi ezinezatifikethi kunye nezicelo zazo ezisemthethweni. Ezi zifundo zenziwa kwi-Intanethi yiYunivesithi yaseStanford, eyunivesithi yaseIvy League eseMelika. Ngelixa ukuphicothwa kwezi zifundo kusimahla, ezinye zazo zifuna umrhumo omiselweyo kubafundi abafuna ukufumana isatifikethi esisemthethweni bakugqiba ngempumelelo nayiphi na yezi zifundo.
Ngokusebenzisa iitekhnoloji zale mihla, iYunivesithi yaseStanford iyakwazi ukubonelela ngezifundo ezikwi-Intanethi, simahla kule meko, kubathathi-nxaxheba abanomdla ukuba bajoyine kwaye bafunde isakhono okanye bafumane ulwazi olufanelekileyo.
Iikhosi zasimahla zeStanford ezikwi-Intanethi zibandakanya iikhosi ezahlukeneyo kwizifundo ezahlukeneyo onokukhetha kuzo kwaye uya kubazi ngeli nqaku.
Uninzi lwezi zifundo zikwi-Intanethi zeStanford zinikezelwa Stanford Online Eqhutywa ngokusesikweni yi IZiko laseStanford loPhuhliso konke phantsi kwesambrela esikhulu seDyunivesithi eyaziwayo yaseStanford, eyamkelwa kwilizwe liphela ngemfundo ekumgangatho wehlabathi kunye nokugqwesa kwizifundo zophando nakwezinye iinkalo.
Ukubonelela ngemfundo ekumgangatho wehlabathi ayiphelelanga ekunikezeleni kuphela kubafundi abakwaziyo ukuyifumana ngokuza esikolweni, endaweni yoko, iyunivesithi isebenzisa ubuchule bale mihla ukusasaza le mfundo ikumgangatho wehlabathi kuye wonke umntu onayo I-PC / ilaptop kunye nonxibelelwano lwe-intanethi.
Ngezixhobo ezifanelekileyo, phantse nabani na angafunda into ayinqwenelayo kwizifundo zasimahla zeStanford ezikwi-Intanethi ngaphandle kokuhlawula i-dime. Ezi zifundo zenziwa ngokulinganayo ngoonjingalwazi abaphezulu beyunivesithi kunye nabahlohli nangoku baqinisekisa ukuba banikezela ngemfundo esemgangathweni kubo bonke nakwabanye abantu.
Ngelixa uninzi lweekhosi zasimahla zeStanford ezikwi-Intanethi zinikezelwa ngokuthe ngqo ngeqonga leStanford Online, ezinye zinikezelwa ngeendlela ezahlukeneyo amaqonga okufunda online Ukusebenzisana neYunivesithi yaseStanford.
1 Ngaba iStanford ibonelela ngezifundo zasimahla ezikwi-Intanethi?
2 Ngaba iikhosi zeStanford ezikwi-Intanethi zikufanele oko?
2.1 Izibonelelo zokuthatha iKhosi yeYunivesithi yaseStandford kwiKhosi
3 Iikhosi ze-18 zaseStanford zasimahla ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi
3.1 Uqeqesho lweNtlekele
3.2 UkuFundwa kweNkcazo
3.3 Ubunzululwazi bekhompyutha
3.4 Isondlo somntwana kunye nokupheka
3.5 Izinto eziyimfuneko kwiQhinga leNkqubo kunye noVavanyo
3.6 Ukuchaza iQuartet yomtya: Haydn
3.7 Ukuyila Umsebenzi Wakho
3.8 Ukusebenzisana noLuntu kunye nabaGuli kuPhando lwezoNyango
3.9 Iialgorithms: Uyilo kunye noHlahlelo
3.10 Amakhondo kwiTekhnoloji yeendaba
3.11 Intshayelelo kwiiHaptics
3.12 Uhlalutyo lombutho
3.13 IMpilo yaBasetyhini yaMazwe ngaMazwe kunye namaLungelo oLuntu
3.14 IiNethiwekhi zoLuntu zezoQoqsho noLawulo: Iimodeli kunye nohlalutyo
3.15 U kufunda
3.16 Ukubhala kwiiSayensi
3.17 Umdlalo weMidlalo
3.18 Intshayelelo eStanford yokutya kunye neMpilo
Ngaba iStanford ibonelela ngezifundo zasimahla ezikwi-Intanethi?
IStanford ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zasimahla kwi-Intanethi kwizifundo ezahlukeneyo ezinikezelwa ngeStanford Online nakwamanye amaqonga okufunda kwi-Intanethi. Ezi zifundo zikwi-intanethi kwaye zisimahla, eli lithuba elikhulu lokuba ufunde esinye okanye nangaphezulu kwesakhono osikhethileyo kwiyunivesithi ephezulu ngaphandle kokuhlawula idime.
Ngaba iikhosi zeStanford ezikwi-Intanethi zikufanele oko?
IYunivesithi yaseStanford liziko lemfundo ephakamileyo kwaye elaziwa kwihlabathi liphela njengenye, iikhosi zineengqibelelo eziphezulu kwezemfundo kwaye wonke umqeshi uyakwazi oku okwenza iikhosi zeStanford ezikwi-Intanethi zikuxabise ngokupheleleyo.
Ukwafunyanwa njengomphumeleleyo eStanford okanye umfundi okoko i-Resume / CV yakho iya kuba nesatifikethi esiqhotyoshelweyo esibonisa ukuba ufundile kwaye wagqiba ikhosi ekwi-Intanethi ngeYunivesithi yaseStanford.
Izibonelelo zokuthatha iKhosi yeYunivesithi yaseStandford kwiKhosi
Iikhosi zikwi-Intanethi, yiyo loo nto awufumani ntlawulo ngayo nayiphi na indlela yezothutho njengomfundi oqhelekileyo. Uhlala ukuhlala kamnandi ekhayeni lakho, eofisini, emotweni kwizifundo zakho.
Kukho izifundo ezahlukeneyo onokukhetha kuzo, unokuthatha isigqibo sokufunda into engaphandle koqeqesho lwakho lokuqokelela ulwazi kwezinye iindawo zokufunda.
Izifundo zasimahla zeStanford ezikwi-Intanethi zifundiswa abafundi ngoonjingalwazi kunye nabahlohli abaphezulu baseStanford, awuyi kubhatala idemo ukonwabela le mfundo ikumgangatho kwaye uya kuthi ujoyine igama leStanford.
Kuba iikhosi zikwi-Intanethi ke ziyabhetyebhetye oko kuthetha ukuba ukhetha iphethini yokufunda evumelana neshedyuli yakho.
Iikhosi zasimahla zeStanford ezikwi-Intanethi ziya kunceda ukuqhubela phambili nomsebenzi wakho onokufumana isakhono esitsha okanye ukubrasha izakhono esele zikubeka ngokuzenzekelayo ngaphambi kokhuphiswano lwabasebenzi kunye neprofayili efanayo yomsebenzi.
Ngokubanzi, ukufunda kwi-Intanethi kulunge kakhulu.
Ngasentla ezinye zezibonelelo zeStanford zasimahla iikhosi ezikwi-Intanethi kunye nesatifikethi, sikwenza ukuba ufaneleke ngokusemthethweni ukuba ufumane umsebenzi, ungawufumana ngokupheleleyo umsebenzi ngesatifikethi esikwi-Intanethi kwaye ufumane nomda wokhuphiswano okoko isatifikethi sakho sivela kwiYunivesithi yaseStanford .
Lixesha lokuba nditshone endodeni, apho unokwazi malunga nezi zifundo zasimahla zeStanford ezikwi-intanethi ezinezatifikethi kwaye uqalise ukufunda kwakho.
Ezi zifundo zisimahla kwaye ziza nesatifikethi sokugqitywa esifuna imirhumo encinci okanye ukungafumani mali nazo, zonke ezi zifundo zikulwimi lwesiNgesi kungoko abathathi-nxaxheba abanomdla kufuneka babe nobuchule obomeleleyo besiNgesi ukuze bathathe inxaxheba.
Ngoku, ngaphandle kokuqhubeka, ndiza kudwelisa ezi zifundo kwaye ndinike iinkcukacha zazo ngokufanelekileyo
Isondlo somntwana kunye nokupheka
Izinto eziyimfuneko kwiQhinga leNkqubo kunye noVavanyo
Ukuchaza iQuartet yomtya: Haydn
Ukuyila Umsebenzi Wakho
Ukusebenzisana noLuntu kunye nabaGuli kuPhando lwezoNyango
Iialgorithms: Uyilo kunye noHlahlelo
Amakhondo kwiTekhnoloji yeendaba
IMpilo yaBasetyhini yaMazwe ngaMazwe kunye namaLungelo oLuntu
IiNethiwekhi zoLuntu zezoQoqsho noLawulo: Iimodeli kunye nohlalutyo
Intshayelelo eStanford yokutya kunye neMpilo
Iphuhliswe ngeNkqubo yoNyango oluNgxamisekileyo yeStanford yoPhendulo oluNgxamisekileyo, le khosi yasimahla yaseStanford yenzelwe ukuxhobisa nokulungiselela abafundi ngayo nayiphi na imiba engxamisekileyo enxulumene nempilo yabantu ngokubanika ulwazi ngamayeza entlekele.
Ikhosi yoQeqesho lwezoNyango iqulethe isilabhasi eyahlukeneyo efundiswa ngoonjingalwazi bezonyango abahlukeneyo baseStanford, nokuba unolwazi lwezonyango okanye awamkelekanga ukuba uthathe le khosi njengoko uya kufundiswa konke okufuneka ukwazi kwasekuqaleni.
Ixesha lesifundo: Iiveki ezi-8
Umzamo: iiyure ezingama-1-2 ngeveki
Qinisekisa isiFundo seStatistiki ngokuthatha inxaxheba kule khosi yasimahla yaseStanford apho uza kufumana ulwazi olusisiseko kwizobalo kwaye ufunde ezinye zezixhobo eziphambili ezisetyenziselwa ukumodareyitha kunye nedatha yesayensi.
Into oza kuyifunda ibandakanya ukubuyela umva komgangatho, ukumodareyitha iimodeli, ukhetho lomgama kunye nokunye okuninzi. Olu lwazi lunokusetyenziswa kulo naliphi na ishishini kwaye nakwicandelo lezonyango yiyo loo nto unokuba kulo naliphi na icandelo lokufunda kwaye usaya kule khosi.
Ixesha lesifundo: Iiveki ezi-9
Sonke singavuma ukuba esi sesona sakhono sifunwayo kwihlabathi namhlanje phakathi kwabanye, ungafunda yonke into malunga neekhompyuter, iikhowudi ezisisiseko kunye nokunye okuninzi kule khosi yasimahla yeStanford ekwi-intanethi. Le khosi ifundiswa kwasekuqaleni ngoonjingalwazi be-ICT baseStanford kunye nabahlohli abaphambili.
Ukuthatha inxaxheba kule khosi kunye nokuqinisekiswa kuya kukuvulela amathuba emisebenzi kunye nethuba lokufunda ngakumbi malunga nobuchwephesha beekhompyuter kunye neenkqubo zokufaka iikhowudi.
Ixesha lesifundo: Iiveki ezi-6
Umzamo: iiyure ezingama-4-6 ngeveki
Njengomzali, umongikazi okanye umntu ofuna nje ukuqokelela ulwazi oluninzi, le khosi yasimahla ye-Intanethi yaseStanford iya kukubonelela ngolwazi ngendlela yokwenza indlela yokutya yomntwana ekuqondeni ukutya kwabo kunye nendlela yokubanika ukutya okufanelekileyo.
Ukuqinisekiswa kwisondlo sabantwana kunye nokupheka kunokukufumanela umsebenzi wokuba ngumfundisi-ntsapho, kukubonelele ngolwazi ngendlela elungileyo kunye nokuba yintoni efanelekileyo ukondla abantwana bakho kunye nabanye.
Ixesha lesifundo: Iiveki ezi-5
Nokuba yeyiphi na inkqubo ehleliweyo mhlawumbi yokukhuthaza, yokunyusa ingxowa-mali, imihla yokuzalwa, iintlanganiso okanye nayiphi na enye inkqubo yezentlalo enxulumene nezempilo, okusingqongileyo, imfundo kunye nezinye zihlala zifuna uhlobo lwesicwangciso sokwenza inkqubo ibe yimpumelelo.
Ungabufumana obu buchule ngokuthatha inxaxheba kule khosi yasimahla ye-Intanethi yaseStanford, ufunde ukwenza izicwangciso eziza kwazisa umsebenzi wakho njengenkokeli engenzi nzuzo okanye umenzi womgaqo-nkqubo kwaye uncede uqinisekise ukuba ufezekisa iziphumo ezifanelekileyo.
Ixesha lesifundo: Iiveki ezi-4
Umzamo: iiyure ezingama-5-10 ngeveki
I-quartet yomtya kwinqanaba elisisiseko lixesha lomculo elibhekisa kwizixhobo ezine zomtya: iivayoli ezimbini, i-viola kunye ne-violoncello, kunye nezixhobo zomculo ziyaziwa ngesixhobo.
Le khosi ibonelela ngokuqonda kwembali malunga nesi sixhobo sinxulumene nokuphumelela kukaHaydn, ukuphumelela kwimbali kunye nokufunda malunga nokubhalwa kwemitya yecartet yamanye amagcisa.
Ixesha lesifundo: Iiveki ezi-10
Umzamo: iiyure ezingama-3-6 ngeveki
Ukuyila ikhosi yakho yasekhompyutheni yasimahla iikhosi ezikwi-intanethi yenzelwe ukunceda abafundi ukuba bangene ngempumelelo kwicandelo elitsha lomdla nokuba uphonononga into onokufuna ukuyenza okanye sele ulungiselele enye, uya kufumana ulwazi ngendlela yokuphucula unxibelelwano lokwenyani kunye nokufunda okutsha iindlela zokuqonda kunye nokusondela kwinethiwekhi.
Le khosi yasimahla ye-Intanethi yaseStanford yenzelwe oogqirha, abaphandi, abaguli kunye noluntu ngokubanzi ukubanceda bahlangane nezigulana kuphando lwezonyango, benze ubudlelwane bokuthembana phakathi kwabaguli nabaphandi.
Ukongeza, abathathi-nxaxheba abanomdla baya kufunda ukuthenga abathengi kukhathalelo lwempilo, izibonelelo, izithintelo kunye nokuvalwa kwendlela kwimveliso yokusebenzisana kwezempilo.
Yandisa ikhompyuter yakho kunye nezakhono zenkqubo ngokuthatha inxaxheba kule khosi yasimahla yaseStanford ekwi-intanethi, ii-algorithms ziyintliziyo yesayensi yekhompyuter kwaye abantu abanezakhono ezinjalo bafunwa ziinkampani zobuchwephesha kwaye namanye amacandelo afuna abantu abanesakhono.
Ukuthatha inxaxheba kule khosi kuyacetyiswa ukuba abafundi banolwazi olusisiseko lwenkqubo njengoko ii-algorithms zijongana nenkqubo nazo.
Umzamo: iiyure ezingama-2-4 ngeveki
Sifumana ubuchwephesha beendaba zosasazo mihla le, ukusuka koonomathotholo nakumabonakude ukuya kumagita e-elektroniki, imidlalo yevidiyo kunye neenkqubo ezahlukeneyo zesandi ezisetyenziselwa ukuvelisa izandi, njengomculo, kunye nokudlulisa ulwazi olwahlukileyo.
Ngokujoyina le khosi, uya kuphonononga ukuba iinkampani eziyila ezi zixhobo zizisa njani ezi mveliso zisuka kwimbono yokungena kwintengiso. Uya kufumana ukuqonda malunga nobomi bemihla ngemihla kwiinkampani ezinje ngeAdobe, iAudio Audio, Izotope kunye nokunye kwaye ufumane ukhetho lwakho lomsebenzi kwicandelo.
Umzamo: iiyure ezi-6 ngeveki
I-Haptics sisixhobo se-mechatronic esivumela abasebenzisi ukuba bazive benyani okanye kwiindawo ezikude, oku kunxulumene neendlela zerobhothi kwaye kunokubonakala kunzima kodwa ukujoyina ikhosi kuya kukucacisela yonke into ngokuthe ngcembe kubandakanya nezakhono ezisebenzayo.
Ikhosi ifundiswa ngu UAllison Okamura, Uprofesa owaziwayo weYunivesithi yaseStanford yobunjineli boomatshini oya kuxhobisa abafundi ngamava okuhlanganisa iinkqubo zoomatshini, ukwenza iisekethe, iinkqubo, ubunjineli kunye nendlela yokuvavanya indalo.
Umzamo: iiyure ezingama-1-10 ngeveki
Imibutho ifumaneka kuyo yonke indawo emhlabeni kwaye wonke umntu uyinxalenye yayo, nokuba awunaye ngoku kuya kwenzeka ngamanye amaxesha. Kule khosi yokuzazisa ehamba ngokwakho, uya kufunda iithiyori ezininzi zokuziphatha kombutho kwaye uzisebenzise kwimeko yokwenyani yotshintsho lombutho.
Ngokujoyina le khosi yasimahla ye-Intanethi yaseStanford, uya kufumana izakhono nolwazi kulawulo, ithiyori yombutho, uhlalutyo kunye nenkcubeko. Izakhono zolu hlobo ziyafuneka phantse kuwo onke amacandelo ehlabathini kwaye ukuqinisekiswa kuya kukwenza ufaneleke kuwo nawuphi na umsebenzi.
Ixesha lesifundo: Iiveki ezi-11
Le khosi yasimahla ye-Intanethi yaseStanford ichaphazela ulwazi kwezempilo yabasetyhini nakwimicimbi yamalungelo oluntu ukusukela ebusaneni ukuya ebudaleni, kubandakanya ulwazi ngongenelelo oluqinisekileyo olunxulumene nale micimbi.
Ngobuchule bakho obutsha obufunyenweyo, unokuba yinxalenye yabameli bamalungelo oluntu abalwela amalungelo omntwana oyintombazana kwaye uncede ukuhlangula abantu basetyhini kwiimeko ezimbi. Unokwabelana ngesakhono sakho kunye necandelo lezonyango ngokunjalo.
Joyina iStanford Online kule khosi yokuhambahamba ngokwakho kwaye ufunde indlela yokumodareyitha intlalo noqoqosho kunye nefuthe labo ekuziphatheni kwabantu. Uya kufumana izakhono kwinethiwekhi yoluntu, ithiyori yomdlalo, uhlalutyo lwenethiwekhi kunye nethiyori enokusetyenziswa kwimibutho eyahlukeneyo ngakumbi kwisebe le-HR.
Ukufunda ngomatshini lisebe leNzululwazi yeDatha ejongene nokwenza ukuba iikhompyuter zisebenze ngaphandle kokucwangciswa ngokucacileyo. Iimoto eziqhutywa nguwe, ukukhangela kwiwebhu, ukuqonda intetho kunye nokunye okuninzi yinxalenye yoyilo olumangalisayo lokufunda komatshini.
Joyina le khosi ukuze ufumane ulwazi lwethiyori kunye nolusebenzayo kwezona ndlela zisebenzayo zokufunda ngomatshini kunye nendlela yokuzisebenzisa ukuze uzisebenzele wena kunye nabanye, ukuze ubhatalelwe iinkonzo zakho.
Imigaqo yokubhala kakuhle, amaqhinga okubhala ngokukhawuleza kwaye ngaphandle koxinzelelo oluncinci, ukuphononongwa koontanga, ukubhala ngokubhala kunye nokubhala kubaphulaphuli ngokubanzi kufundiswa kwizazinzulu ngale khosi yasimahla yaseStanford yokubenza babe ngababhali abangcono besebenzisa imizekelo esebenzayo kunye nokuzilolonga.
Ithiyori yomdlalo yimodeli yemathematics yokunxibelelana ngobuchule phakathi kweearhente ezinengqiqo nezingaqiqiyo, kubandakanya imodeli yongquzulwano phakathi kwamazwe, imikhankaso yezopolitiko, ukhuphiswano phakathi kweefemu kunye nokuziphatha kwezorhwebo kwintengiso.
Ngokujoyina le khosi yasimahla ye-Intanethi yaseStanford, uya kufumana izakhono kunye nolwazi kwimidlalo yethiyori, ukubuyela umva, umdlalo weBayesian kunye nokufunda iindlela ezahlukeneyo zokusombulula iingxaki.
Uyile nto uyityayo. Ukutya uhlobo olufanelekileyo lokutya ngexesha elifanelekileyo kuza nezibonelelo ezininzi zempilo, abantu abaninzi banengxaki yokutyeba kakhulu, isifo seswekile kunye nezinye izifo ezinganyangekiyo ezinokuthintelwa ngenxa yokuba betya ukutya okungalunganga.
Joyina le khosi yasimahla ye-Intanethi yaseStanford kwaye ufumane ulwazi malunga nesondlo, isayensi yokutya kunye nokhuseleko kunye ne-informatics yezempilo ekunceda ukuba wazi iintlobo ezahlukeneyo zokutya okufunwa ngumzimba wakho kwaye unokubeka ulwazi lwakho kwaye ufumane umvuzo ngokuba kukutya kunye nesondlo sezempilo.
Umzamo: iiyure ezingama-1-3 ngeveki
Oku kuzisa isiphelo kwizifundo zasimahla zaseStanford ezikuluhlu lwethu apho kunganyanzelekanga ukuba uhlawule idenariyo yokufunda uninzi lwezi zifundo njengoko uthanda kunye nentlawulo nje yokufumana ezinye izatifikethi.
Ezi zifundo zivela kwiYunivesithi yaseStanford kwaye ziza nesatifikethi esonelisayo sokugqitywa esamkelwa yi-HR yonke emhlabeni, ngesatifikethi sakho se-intanethi unokufumana umsebenzi ohlawula kakuhle kumacandelo ahlukeneyo okanye ukuba sele usebenza kwaye ufumene isatifikethi banethuba lokunyuselwa okanye ukunyuswa kwemivuzo.
Kubalulekile ukuba abathathi-nxaxheba bagxile kwizifundo zabo kuba kwi-Intanethi uninzi lweziphazamiso zibophelelekile ukuba zize ngendlela yakho kodwa ngokuzimisela ungagqiba ikhosi oyifunayo kwaye ube nezakhono.
Iingcebiso zokwamkelwa kweMasters yeStanford ekwi-Intanethi
Izifundo zasimahla ze-Coursera ezingama-35 ezinesiQhagamshelo sokuSebenza kwazo
Ikhosi yasimahla yeStanford ekwi-intanethi
Post Previous:I-3 zeYunivesithi ezingabizi kakhulu eMzantsi Afrika zaBafundi beZizwe ngezizwe
Okulandelayo Post:Iikholeji ezi-6 eziGqwesileyo zabaFundi beZidanga zesiNgesi abanemiGangatho yokuHlawula iMali
Pingback: Ungalufumana njani ulwamkelo kwiStanford Online Masters.